နားထောင်စွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ (Improving listening skills) - Myanmar Network
နားထောင်စွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ (Improving listening skills)
Posted by zar ni (My Way!) on August 22, 2013 at 11:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်တော့် facebook group ဖြစ်တဲ့ “အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြသူများ” မှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ မကြာခဏမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ “listening” ကောင်းချင်တယ်။ နားထောင်စွမ်း ရည်တိုးတက်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတာပါပဲ။ စာသင်သားတွေအတွက် listening ဟာ စိန်ခေါ်မှုကြီးသော ခက်ခဲသော အတားအဆီးတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ သို့သော်လည်း listening စွမ်းရည်ဟာ သူတို့လိုလားသော ပိုင်ဆိုင်ချင်သောစွမ်းရည် တစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်။ listening စွမ်းရည်ကောင်းမှ နိုင်ငံခြားသားတွေပြောတာနားလည်မည်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်း၊ ဗွီဒီယို၊ ရုပ်ရှင် စသည်တို့ကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှ သတင်းတွေ နားလည်နိုင်မည်။ language input နှစ်မျိုးအနက်မှ listening သည် ဘာသာစကားလေ့လာခြင်း၏ သဘာဝအကျဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နေပြန်သည်။
နားထောင်ခြင်းဟာမည်သည့်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရာတွင်မဆို အလွန်အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်ဘ၀တုန်းက ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ရသည့် အလုပ်မှာ နားထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘတွေ၊ ကလေးထိန်းတွေ၊ ကြီးတော် ဦးလေး စသည်တို့ပြောသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်ခြင်းသာတတ်နိုင်သည်။ စိတ်ထဲရှိတာပြန်မပြောနိုင်။ ရေးနိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာဝေလာဝေး။ သို့နှင့်ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ နားထောင်စွမ်းရည်မှာ ကံအကောင်းအကြောင်းမလှစွာ ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့ရသည်။
ဘာသာစကားလေ့လာသူအများစုသည် စာသင်ခန်း၊ သင်ရိုးစာအုပ် တို့ဖြင့်သာလေ့လာခဲ့ရသူ များပေသည်။ စာဖတ်သူသာ ၄င်းတို့ထဲမှတစ်ယောက် ဆိုပါက အင်္ဂလိပ်အပြောစကားကို နားလည်ဖို့အခက်အခဲကျိန်းသေပေါက်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ လက်တွေ့အပြောစကားနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်ထဲမှ စကားတို့သည်မတူညီကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူတို့သည် အရေးမှာထက် အပြောစကားမှာ ဘန်းစကားတွေ အီဒီယံတွေပိုသုံးလေ့ ရှိကြသည်။ အပြောနှင့်အရေး မတူညီသည့်စကားလုံးများသုံးစွဲတတ်ကြသည်။
အပြောတွင် "um", "hmm", "ah", "uh" ကဲ့သို့သောအာလုပ်စကားများလှိုင်လှိုင် သုံးစွဲကြသည်။ relative clause များသုံးသည့်အခါ that ဆိုသည့်စကားလုံးကို ဖြုတ်ထားခဲ့တတ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းနှင့်ပြဌာန်းစာအုပ်များသည် အရေးနှင့် ခန်းခန်းနားနားစကားပြောတွင်သုံးသည့် အရေးနှင့် ခန်းခန်းနားနားစကားပြောတွင်သုံးသည့် “proper English” နည်းမှန်လမ်းမှန် အင်္ဂလိပ်စကားကိုသာသင်ကြားပေးလေ့ရှိသည်။ casual English ဟူသည့် ထသွားလာသွားအင်္ဂလိပ်စကား၊ အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားကိုအရေးမထားကြပါ။
စကားလုံးများသည် တစ်လုံးချင်းအသံထွက်သည့်အခါ နှင့် အခြားစကားလုံးများနှင့် တွဲလျက်အသံထွက်သည့်အခါ မတူညီကြပါ။ “connected speech” ဟုခေါ်သည့် ပုံမှန်အပြောစကားကို စာသင်ခန်းထဲတွင်ကြားနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ ဂရုတစိုက် အသံထွက် ထားသည့်အပြောစကားကိုသာ ကြားရပေလိမ့်မည်။
W'joomine hand'nme thabag ovethare? ဆိုသည်ကိုနားလည်မည်မဟုတ်ပါ။ "Would you mind handing me that bag over there?" ဟုသာ စာသင်ခန်းတွင် ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
လူတို့သည်လက်တွေ့ဘ၀တွင် different topics အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး ပြောတတ်သည်။ အချို့သောအကြောင်းအရာများသည် အများနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ လူနည်းစုသာနားလည်နိုင်သည့် ဝေါဟာရများလည်းပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်း တွင်တော့ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းသင်ကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူအများအတွက် ယေဘုယျကျသည့် သင်ခန်းစာများသာပါဝင်နိုင်သည်။
နားထောင်စွမ်းရည်တိုးတက်ရန် နားထောင်ခြင်းသည်သာ ထိရောက်သော၊ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ အခြားနည်းမရှိပါ။ နာရီပေါင်းများစွာ နားထောင်၊ နားထောင်ရင်းဖြင့်သာ တိုးတက်လာရပါမည်။ ဒါကတော့ လူတိုင်းသိတာပေါ့ဟု မိတ်ဆွေ စောဒကတက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤမျှလွယ်ကူရှင်းလင်းသည့်ကိစ္စတစ်ခုကို သူတို့ မလိုက်နာကြပါ။
တက်ကြွစွာနားထောင်ပါ။ listen actively
မိမိအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ တက်တက်ကြွကြွနားထောင်ဖို့ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားလေ့လာခြင်းသည် တူရိယာတစ်ခုတီးခတ်နိုင်ရန်လေ့လာခြင်းနှင့် အတော်တူသည်။ ဂီတာကိုအပျော်သဘောခံစားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ဆိုလျှင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနားထောင်တတ်ရမည်။ ဥပမာ Bass ဂီတာကို လေ့လာနေသူဖြစ်ပါက သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ melody နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများထဲမှ မိမိလိုအပ်သည့် bass အပိုင်းကိုသာ အာရုံစိုက်နားထောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား လေ့လာရာတွင်လည်းထိုနည်းလည်းကောင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်ပြောသည့် စကားလုံး များကိုသာမက သူဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်အား နားလည်ရန်၊ အသံထွက်နှင့်အသံနေအသံထား လေ့လာရန်၊ လေယူလေသိမ်းကိုလေ့လာရန် သီးခြားစီ အားစိုက်နားထောင်ရပေမည်။
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသည် passive listening ထက်ပိုအကျိုးရှိပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အသံသာကြားရသည့်ရေဒီယိုထက် အရုပ်ပါမြင်ရသည့် သတင်း၊ ဗွီဒီယို ကထိရောက်သည်။ ဗွီဒီယိုတွင် အင်္ဂလိပ်လို စာတန်းထိုး subtitle ပါလျှင် ၄င်းကိုဖတ်၍ သရုပ်ဆောင်များဘာပြောသည်ကို နားမလည်လျှင်ကြည့်နိုင်သည်။ ၄င်းသည် interact လုပ်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားကို ငြိမ်ငြိမ်လေးကြည့်နေရုံထက် လူတစ်ဦးနှင့်အပြန်အလှန် စကားပြောလေ့ကျင့်ခြင်းက ပိုထိရောက်သည်။ စကားပြောရသည့်အခါ သူတပါးစကားကို နားလည်ဖို့ နားထောင်ခြင်းကို မဖြစ်မနေအားထုတ်ရပေသည်။ ၄င်းသည့် အပြည့်အ၀ interaction ဖြစ်သည်။ google, skype, viber တို့ဖြင့် video call လုပ်နိုင်သည့်ခေတ်တွင် လေ့ကျင့်ဖော် native language partner ရရန်မခက်ခဲပါ။ language exchange website များတွင်မိတ်ဆွေဖွဲ့လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်အတန်း Level of difficulty
တစ်ချို့က“နားတော့ထောင်တာပဲ။ နားမလည်တာတွေများတော့ စိတ်ဓါတ်ကျတယ်” ညည်းတတ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင်တော့ ရေလိုက်လွဲနေသည်ဟုသာ ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိနားလည်နိုင်သည့်အဆင့်ကိုနားထောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့မီဒီယာလောကတွင် special English ဟူသည့်စကားလုံးသည်ထင်ရှားပါသည်။ နာမည်ကြီးရုပ်သံများဖြစ်သည်။ BBC နှင့် VOA တို့တွင် special English ဆိုသည့်ကဏ္ဍတစ်ရပ်ထားပေးပါသည်။ listening သာမက ၄င်းတို့ပြောသမျှကို စာဖြင့်ဖတ်နိုင်သည့် transcription လည်းရှိသည်။ နားထောင်ရင်း နားမလည်သည်ကို script ကြည့်၍လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Audio book အသံထွက်ဖတ်ပြသည့် စာအုပ်များစွာလည်း အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
နားထောင်မှုစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ရာတွင် မိမိကိုယ်ကို နယ်ပယ်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားမည်ဆိုလျှင် အလွန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ နားလည်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ သတင်းများကိုနားထောင်လေ့ကျင့်မည်ဆိုပါစို့။ သတင်းကြေညာသူတို့သုံးသောစကားသည် specialized form of speaking. သီးသန့်စကားပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်အပြောစကား နှင့်မတူပေ။ ထို့အတူ ဘောလုံးပွဲကြေညာသူတို့သုံးသောစကားပုံစံ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် နောက်ခံ စကားပြောသူတို့သုံးသော စကားပုံစံနှင့်ဝေါဟာရများမှာ သီးခြားစီရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘက်စုံနားထောင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်လိုပါက နယ်ပေါင်းစုံမှ စကားများကို နားထောင်လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ variety များလေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည်လာလေ ဖြစ်မည်။ အောက်ပါနမူနာများကတော့ မိမိနားထောင်နိုင်သည့် listening တစ်ချို့ဖြစ်သည်။
Watch lots of hours of movies, TV shows, documentaries and videos in English, with English captions.
Listen to English podcasts onatopic that's interesting to you
Watch football matches and listen to the commentators
Watch and listen news
နားထောင်ပေမယ့် နားမလည်ဘူးဆိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးအားပေးချင်တဲ့စကားကတော့ နားမလည်လည်းနားထောင်ပါ။ နားထောင်ရင်းနှင့် စကားလုံးတစ်လုံး၊ အသံထွက် စသည်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုတော့ ရပါလိမ့်မည်။ ယင်းသည်ပင်အမြတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ထိုင်းဘာသာ လေ့လာစဉ်က ထိုင်းရုပ်ရှင်၊ သီချင်းများ နေ့စဉ်နာရီများစွာနားထောင်ခဲ့ပါသည်။ အလွန်ကြိုက်သည့် သီချင်းတစ်ချို့ဆိုလျှင် သီချင်းစာသား download ဆွဲကာ အကြိမ်ရာ ဂဏန်းနီးပါး နားထောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ယင်းသည်ပင် ဘာသာစကား၏အသံများကို နားရည်ဝဖို့လမ်းစဖြစ်သည်။ နားရည်ဝသည့်ဆင့်မှ နားလည်သည့် အဆင့်တဖြည်းဖြည်း ရောက်ပါသည်။ ယခုလည်း extra ဆိုသည့် Spanish စပိန်ဘာသာစကားပြော ဇာတ်လမ်းတွဲအား နှစ်နှစ်သက်သက် ကြည့်ရှုနေဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
Permalink Reply by Mie Mie Win Maung on August 26, 2013 at 16:55
Permalink Reply by nyochaw on August 26, 2013 at 19:33
accept u's advice
Permalink Reply by sint on August 27, 2013 at 7:08
Permalink Reply by ggcore on August 27, 2013 at 9:39
thanks for your good sharing.... !!!
Permalink Reply by Win Aung on August 27, 2013 at 20:36
Very useful. And nice writing.
Permalink Reply by kyaw htet aung on August 28, 2013 at 10:43
Permalink Reply by Soe Soe on August 29, 2013 at 15:52
Permalink Reply by lollypoplay on August 29, 2013 at 16:28
thanks. where i can find and download audio english easy lessons? please link me.
Permalink Reply by zawzawmyint on August 29, 2013 at 22:41
Thanksalot for your teaching.
Permalink Reply by Tina on August 30, 2013 at 16:26
Permalink Reply by Gyit on August 31, 2013 at 8:48
Appreciate your post & so Thanks,Bro
Permalink Reply by kyawminthant on September 1, 2013 at 17:22